'पथभ्रष्ट व्यक्तिलाई अब सराप लागोस्'
विप्लवी न्यौपाने / प्रचण्ड पत्नी बिरामी हुँदा प्रधानमन्त्री शरेबहादुर देउवा भेट्न प्रचण्ड निवास मै पुग्नुभयो। सीता दाहाल मेरै आमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आएकी पनि छु। तर, एउटा निम्न वर्गीय परिवारको मान्छे बिरामी हुँदा भेट्न को जाने ? उपचार कसले गरिदिने ? हुनेखानेहरू उपचार गर्न विदेश धाउँछन्। गरिबले उपचार गर्ने अस्पताल नेपालमा कहाँ छ ?
गरिबले यो देशमा एमबिबिएस पढ्नै सक्दैनन्। डा. गोविन्द केसी जस्ता महापुरुष, सच्चा डाक्टरको (सेवक) कुरा कुन चाहिँ नेताले सुनिदेलान् ? कुरा उपचारको मात्र हैन, यहाँ त कयौं सरकारी र निजी दुवै किसिमका अस्पतालहरू अमर्यादित ढंगले चलिरहेका छन्। कुशल प्रशासन छैन। कतिपय अस्पतालका डाक्टरहरूसमेत त्यस्तै भ्रष्ट छन्। जता गयो त्यतै नातावाद र कृपावाद मात्रै!
शिक्षा र स्वास्थ्य विकासका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू हुन भन्ने कुरा सत्तामा हुनेले किन बुझ्नै सकेनन् ? मलाई त गरिबका पिरमर्काहरु देखेर हैरान लाग्छ। भगवानलाई पनि सराप्ने गर्छु। राजनीतिले के नाप्यो भन्ने लाग्छ। मेरो देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउने, हरेक तह र तप्काका पथभ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई अब सराप लागोस्। सरकारले व्यक्ती र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्न सकोस्। वडा, गाउँपालिका देखि केन्द्र सम्मका सम्पूर्ण नेता ज्युहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, देश र जनताको सेवामा लाग्नुस्। पद र पैसाको पछाडि कहिलेसम्म ?